6 zvinhu zvakashata zvinokonzera vakadzi mapenzi uye kuita kuti varume vave mapenzi - SAN PLUS MAG - TELES RELAY
HOME » MAZANO »6 zvinhu zvakashata zvinokonzera vakadzi mapenzi uye kuita kuti vanhu vave mapenzi - SANTE PLUS MAG
6 zvinhu zvakashata zvinokonzera vakadzi mapenzi uye kuita kuti varume vave mapenzi - SANTE PLUS MAG
TELES RELAY 18 May 2019
kugashira / Psycho & Sexuality / zvepabonde / Chido - Kufadza /
6 zvinhu zvakashata zvinokonzera vakadzi mapenzi uye kuita kuti varume vave mapenzi
Na: Sarah M
Vose vakadzi vanorota kuziva kuti chii chinovhunga chinoda varume. Kune zvinhu zvakawanda zvaunogona kuda pamusoro pemudzimai, asi zvimwe zvezvinhu zviduku zvavanoita ndizvo zvakasviba zvokuti varume vanopenga zvachose pamusoro payo. Kwemakore mazhinji, varume vakagovana zvavanofarira pamusoro pewavo uye kunyange kana vose vane zvakatarisira zvakasiyana, ivo vose vane hanya nezvinhu zvakafanana.
Iwe unokakaha simba rako rakanaka here? Zviri nyore kunyengedza murume kana une zvigadzirwa zvakanaka uye mazano akanaka. Kana iwe uchida kuziva izvo zvinogona kukumbira kune waunofambidzana naye, heino urongwa hwezvinhu zvinotyisa zvinoita kuti varume vave mapenzi.
1. A lingerie yakanaka
Iva nechokwadi chechinhu chimwe, varume vanoda vakadzi mukati mejasi. Lingerie ine musiyano wekuratidza zvakakwana yako silhouette kumutsa kufara. Kana iwe ukatora nguva yekusarudza chimiro chinokufadza iwe uye chinokuratidza iwe uye kwete chekufuka zvisina kupfeka, ipapo iwe unogona kuva nechokwadi kuti acharudawo zvakare.
2. Kutamba nevhudzi rake
Vamwe vanyengeri vanyengeri vakacherechedza kuti vakadzi vanofarira murume vane tsika isingazivikanwi yekuita navo bvudzi. Vasingazivi, varume vanotora chiito ichi kuti vanyengedze uye kune mukanano wakanaka wekuti havave vasina hanya.
Kudya nemumwe wake ndiyo nzira yakanakisisa yekuita zvepabonde. Pasina kukuvadza mumwe nomumwe, unogona kukwanisa kuita zvishoma naye kuti awedzere chido uye kumuita iye anoda kukurwisana newe.
4. Ita kuti inakidze
Kuti uve nechokwadi chekuita munhu kupenga pamusoro pako, unofanirwa kudzidza kukurudzira kufarira kwake. Nokudaro, iwe unofanira kumurumbidza uye kumuratidza kuti unomuda uye kwete mumwe. Nguva dzose zviri nani kana iri chokwadi, asi kana isiri, saka hazvina kukodzera kunzwa uine mhaka, nokuti shure kwezvose, ndiwo mutambo wokunyengera. Ichokwadi, haufaniri kuidarika nokuti inogona kuendesa kure. Tsvaga nzvimbo yepakati nokutumira mameseji anonyadzisa muenzaniso.
5. Iva nechivimbo iwe pachako
Vanhu vane chivimbo uye vanoziva unhu hwavo vane dambudziko shoma rokuwana zvepabonde. Mukadzi akadzingwa uye asingazvidi iye pachake haana kunaka kune mukadzi anovimba naye. Iwe unofanira kudzidza kudzida iwe sezvauri, uye kuzvikudza iwe pachako. Hakuna munhu akakwana asi kugamuchira zvikanganiso zvake uye kuvada ndiyo kutanga kwakanaka kwekuvandudza kuzvivimba kwake. Iwe uchazoparadzira inshuwarisi yako yakakupoteredza uye izvi zvingasazosiya vamwe vasina hanya ...
6. Ida muviri wako
Kana iwe uchifunga kuti vanhu chete vane miviri yakakwana vanoda miviri yavo, iko kukanganisa kukuru! Munhu wose ari seksikäs nenzira yake pachake nokuti chido chepabonde chinhu chikuru pamusoro pemafungiro nemafungiro sekuonekwa kwemuviri. Iwe ungashamiswa nemhinduro dzacho dzinoita kuti vadzidzisi vanyengedze vawane apo pavanokumbira varume kuti rudzi rwemukadzi rwavanokweverwa. Mhinduro dzacho dzakasiyana zvakasiyana zvokuti dzinopokana mubvunzo hwose hwakanaka. Tanga nekuda rutivi rwako rwema sexy uye varume vachaita zvakafanana.
Nyaya iyi yakatanga kutanga HURI HURU MAGAZINI
Astrology: Heino zviratidzo zve5 zodiac iwe haufaniri kuvimba - HEALTH PLUS MAG
Mazano: Saka ndizvo zvazviri! 5 zvakawanikwa zvinyorwa zvakaitwa nevashandisi veIndaneti, uye ndiani akakodzera mubairo
The Telegram uye Voice of the North, Gauls inotsanangurira mutauriri wepurezidhendi
"Ok Google": Sei SEO izwi rekutsvaga kuchinja?
🔥 116 € the Xiaomi Mi Play model 4Go + 64Go: hezvino
Ndechipi musiyano pakati pebundu uye kenza?
Mupepeti anopomerwa mhosva yekuratidza mifananidzo yezvinonyadzisira kuvana - xnxx
Cameroon - Job Offers187
VANHU & VANHU3,730
KUCHOKURUKURWA KWENYANZERO YE AFRICA84
TECH & TELECOM2,078